पहिलो स्वीकार अक्सर भयावह छ। मानिस जहाँ सुरु गर्न थाहा छैन भन्न के थाहा छैन, डर र बुबा डर छ कि यो बारेमा खराब सोच्नुहोस्। यो तपाईं स्वीकार सोचिरहेका छन् भन्ने राम्रो छ। सकेसम्म यो sacrament भाग लिन प्रयास गर्नुहोस्। कसरी पहिलो पटक स्वीकार गर्न? तपाईंको डर समय, तपाईं आफ्नो पाप बारेमा कुरा गर्न सजिलो हुनेछ, सामान्य हो।
सहभागिता फ्रिक्वेन्सी बारेमा
निस्सन्देह, राम्रो व्यक्ति स्वीकार पछि सहभागिता लिन्छ भने। तर यो सधैं पूर्ण तयार प्राप्त गर्दैन। त्यसैले, मान्छे आफ्नो पहिलो स्वीकार राख्नु। म sacrament बिना स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? हो, साँच्चै, अक्सर तपाईं sacraments पहिलो हुन सक्छ गर्न Resort गर्न आवश्यक छ। मिस को laity लागि रूसी अर्थोडक्स चर्च मा बारम्बार सहभागिता। सामान्यतया, तिनीहरूले कचौरा दुई तीन हरेक हप्ता भेट्नुपर्छ गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। तर कम से कम एक पटक सहभागिता प्राप्त गर्न एक महिना यो sacrament बिना व्यक्तिको रूपमा सिफारिस गरिएको छैन यदि चर्च जीवन बाहिर फल्स। त्यसैले, यस sacrament, तपाईं अझै तयार छैनन् भनेर थाह पाउँदा स्वीकार गर्न नडराऊ। चर्च कम्तिमा हरेक दिन सक्छन् पश्चात्ताप।
विवेक को कल मा
कसरी पहिलो पटक स्वीकार गर्न? प्रत्येक व्यक्ति जो एक ठूलो वा कम हदसम्म पछुतो, आफ्नो कामहरू थाह छ। सामान्यतया अन्तस्करणले हामीलाई जानिजानि खुला गर्छ। त्यसैले, तपाईं पहिलो पटक स्वीकार आउन गर्दा, यो आवश्यक बिरामी र तपाईं आफ्नो व्यवहार गलत महसुस सबै बताउन छ। तपाईं पछि आउनेछ पुस्तकहरू को तयारी पूरा गर्नको लागि। सुरू गर्न, डर भन्दा बस प्राप्त र पुजारी को उपस्थिति मा परमेश्वरको पश्चात्ताप।
कसरी चर्चमा स्वीकार गर्न, र जब यो हुन्छ? आफ्नो कार्य - तपाईं गलत, आफ्नो छैन नातेदार वा अपराधीहरूले के गरे भन्न। आफूलाई सफाइ इच्छा - मानिसको प्राकृतिक इच्छा, तर पश्चात्ताप को समयमा आफ्नो कार्य हो - पुजारी प्रभावित छैन, र परमेश्वरको मिलाप हुन। बाटो गरेर, छाप तपाईं एक पुजारी, चकित सक्नुहुन्छ धेरै गलत कुरा विचार भने छ। सायद, यो अनुकम्पापूर्ण र dispassionately व्यवहार हुनेछ। उहाँले ख्रीष्टको अदृश्य उपस्थिति लिन्छ जो पश्चात्ताप मात्र साक्षी। यो सेवा अघि पुजारी यस्तो लेखिएको जो प्रार्थनामा यसो छ। जब म स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? सामान्यतया पश्चात्ताप रात कहिलेकाहीं साथ, साँझ सेवा पछि प्रस्ताव गरिएको छ। स्वीकार को बिहान सेवा गर्नु अघि सुरु वा पनि एकै समयमा ठाउँ लिइरहेको छ। यस मन्दिर नजिकै सामान्यतया अनुसूची पोस्ट। को monasteries अक्सर स्वीकार र असामान्य पटक गर्न सक्छन् जो कर्तव्य पूजाहारीहरूले छन्।
कसरी पहिलो पटक स्वीकार गर्न? महत्त्वपूर्ण कुरा, के गर्न सक्छन्, भूल छैन अनुभवी विश्वासीहरूलाई जस्तै, - पाप सूची लेख्नुहोस्। पूर्व-क्रान्तिकारी समयमा मानिसहरू एक बच्चाको रूपमा चर्च आए र पुजारी डराएका थिए। अब मानिसहरूले यसलाई कि पहिले को पश्चात्ताप गर्न चर्च जान गर्नुभयो उपयोगी छ भनेर, रूपमा प्रारम्भिक कारण उमेर परमेश्वरको आउँछन्। यो तपाईंको पहिलो स्वीकार छ कि पुजारी भन्नुहोस्। यो पश्चात्ताप र जिम्मेवारी को अधित्याग छ - सबै पापी भन्न प्रयास नगर्नुहोस्। निर्दोष मानिसहरू, पनि, हुँदैन। लगभग सबै चर्च आउन जो, उदाहरणका लागि, जिज्ञासा संग सदस्य पढ्ने अनुभव छ। धेरै गफ, निन्दा र नियमित ढाँट्छन्। त्यसैले तपाईं भन्न केहि पाउन सक्नुहुन्छ। प्रश्नहरूको लागि प्रतीक्षा छैन, आफैलाई भन। आवश्यक छ भने, बुबा सोध्छन्।
कसरी पहिलो पटक स्वीकार गर्न? मानसिक गर्न मदतको लागि परमेश्वरलाई सोध्छन् र ईमानदारी पश्चात्ताप। प्रभु सबै क्षमा गर्ने शक्ति छ। विशेष पुस्तकहरू मद्दत एक जीवनकालमा, - पहिलो स्वीकार गरेपछि व्यवस्था ठूलो समय (सामान्य Confession)।
पत्रुस र Fevronia Murom ठेगाना, समीक्षा, फोटो को अवशेषहरूको
बालिका महिना नामहरू: कसरी छोरी को नाम चयन गर्न
जहाँ यो रूस मा धूम्रपान गर्न निषेध गरिएको छ - स्थानहरू र सुविधाहरू सूची
कसले हो "द Mentalist" रक्त यूहन्ना? यो श्रृंखला "को Mentalist"
स्वास्थ्य "शाही" रंग
Hundertwasser हाउस। भियना आकर्षण
परिचयात्मक सातौं कर्ड: यो के हो, के उपचार के हो वा अनुमति?